Zimbabwe court throws out election-fix case
Zimbabwe’s highest court has thrown out a legal challenge that alleged the July 31 elections won by president Robert Mugabe were marred by fraud.
Zimbabwe in crisis - Relentless tyranny
The 12.75m residents of Zimbabwe edged ever closer to a crisis point yesterday after Robert Mugabe dismissed allegations of fraud in the country’s presidential election.
Zimbabwe votes - In grip of corruption
Everything is relative and the corruption charges levelled at Robert Mugabe’s Zanu-PF by Zimbabwe’s opposition over this week’s elections are far beyond anything possible in a more developed country, though some Russians might disagree.
Mugabe sued by his own PM
ZIMBABWE’S prime minister is suing President Robert Mugabe, claiming he violated the constitution and a power-sharing agreement.
Zimbabwe given green light to sell diamonds
A new agreement allowing Zimbabwe to sell its controversial diamonds was met with caution by rights groups who documented violations and killings in the country’s diamond mines.
Zimbabwean aide cleared
A JUDGE yesterday acquitted Roy Bennett, a top aide to Zimbabwe’s prime minister, in an alleged plot to overthrow President Robert Mugabe, in a case that has strained the unity government.
The International Monetary Fund (IMF) has restored Zimbabwe’s voting rights after a seven-year suspension over failure to pay €950m it owes the organisation and other creditors.